နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများရဲ့ ဆန်းဒေးကမ်ပိန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
“လောကအလင်း ပညာဒါနသင်တန်းကျောင်း အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် ပြီးစီး”
ပိတောက်ရနံ့ စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ ဂုဏ်ပြုပွဲ ပြုလုပ်
Co Thagyan - ကော်လိုရာဒိုက မိုးသောက်ပန်းသင်္ကြန်မြင်ကွင်း
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာကွန်မြူနီတီအလုပ်အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ပိုစတာများထုတ်ပြန်
မေ ၂၅၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်းတလပြည့် သာဓုကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပ
ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၂
One Response to နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများရဲ့ ဆန်းဒေးကမ်ပိန်း
thet swe thein on May 2, 2012 at 12:06 am
all right . that very important job for myanmar democracy. they need to free and myanmar justice process are still in weak point